Ohatrinona ny vola ilainao hanatsarana ny LGA 1700 | TeraNews.net
mpanoratra Nikitin Eugenius Navoaka tamin'ny 12.08.2021
Raha ny kajikajinay, ny vidin'ny fividianana ny singa rehetra amin'ny LGA 1700 dia ho $ 2000. Ary hanome tatitra feno izahay, araka ny antony. Ary minoa ahy, misy traikefa betsaka amin'ity raharaha ity.
Mazava ho azy fa hariantsika avy hatrany ny mpikirakira teti-bola rehetra, toa ny Celeron, Pentium ary ny Core i3. Izy ireo dia afaka dinihina amin'ny fotoana maharitra ihany - mba hividy processeur matanjaka kokoa rehefa milatsaka ny vidiny. Fa ity misy loteria. Tahaka ny amin'ny 1151 v1 sy ny v2, ny processeur taloha dia mety tsy mifanaraka amin'ireo vaovao. Raha efa mandray ny TOP ianao dia tsara kokoa ny mifantoka amin'ny Core i7 (farafaharatsiny), Core i9 na Xeon.
Fanavaozana ny motherboard LGA 1700
Ny endrika dia ampifanarahina amin'ireo singa misy ao amin'ny rafitra. Mpanohana ny FullTower izahay. Mazava ho azy fa tsara kokoa ny mijery mankany ATX. Ity dia chipset feno misy headroom amin'ny ho avy. Izahay dia manome lanja hatrany ny marika Asus. Ireo tovolahy ireo no mitarika ny tsena sy manao vokatra avo lenta. Raha tsy izany, azonao atao ny mandray MSI, Gigabyte, Biostar na ASRock.
Ny vidin'ny motherboard LGA 1700, amin'ny kinova feno, dia manodidina ny 500 $. Tsy TOP io. Miresaka momba ny andian-dahatsoratra takiana feno miaraka amin'ny mety fampidirana, fanitarana ary fanavaozana ireo singa manaraka izahay. Mba hazava kokoa - farafaharatsiny farafahakeliny slot 4 ho an'ny RAM, 8 SSD, karatra horonantsary 2, fampangatsiahana tsara, feo avo lenta, fanohanan'ny processeur LGA 1700 rehetra.
Ny vidin'ny processeur an'ny Intel Core i7 LGA 1700
Izay maty amin'ny andiany Core i7 miditra amin'ny tsena dia manana $ 500-600. Miresaka momba ny processeur miaraka amin'ny matetika mihoatra ny 3 GHz izahay. Izany hoe tsara kokoa ny mifantoka amin'ny mari-pamantarana avo kokoa. Mazava fa ny processeur voalohany dia hatolotra amin'ny vidiny lafo. Fa afaka miandry iray volana ianao ary mividy azy ireo amin'ny vidiny sahaza.
Tandremo ny zava-misy fa mety manana ivon-tsary eo amin'ny puce ny processeur, na avoaka tsy misy izany. Ny fahasamihafana dia 20-30 dolara amerikana. Fa tsara kokoa ny mividy amin'ny sary an-tsary. Raha tapaka tampoka ilay adapter video discrete dia hiasa ny rafitra. Mety tsy ho tapaka ny karatra horonantsary. Ity dia loteria. Fa tsara kokoa ny misoroka an'io safidy io. Rehefa dinihina tokoa, 30 $ dia tsy be.
Ny habetsaky ny RAM ho an'ny LGA 1700
RAM 8 GB no ambany indrindra amin'ny rafitra maoderina. Ny rafitra miasa Windows 64 bit dia mihinana 3 GB. Tsy misy serivisy mihodina io. Ho an'ny PC misy SSD izay tsy ahafahanao mampiasa kapila ROM hamoronana SWOP, ny toerana farafahakeliny dia 16GB. Noho izany, miaraka amina rafitra noana vaovao sy matanjaka be kokoa, tsara kokoa ny mifantoka amin'ny 32 GB farafahakeliny. Ny tsara indrindra dia tsara kokoa ny mametraka RAM 64 na 128 GB.
Misy olona hilaza fa nampiakatra be ny bara izahay. Tsia. Arakaraka ny maha-mamokatra kokoa ny rafitra no mahatonga ny fampiharana vaovao mitaky fangatahana vaovao. Vaovao Windows 11izay piraty efa niaina mandany RAM 6GB. Alao an-tsaina hoe ny mpandahatra fandaharana rehetra, mahita ny fahaizan'ny sehatra, dia hampiakatra fatratra ny fari-pitsipiny. Ity singa ity dia tsy maintsy raisina. Mazava ho azy fa tsara kokoa ny mividy trims DUAL. Izany hoe andiany iray (laharana fety), manana ny mampiavaka azy.
Noho izany, maka 128 GB RAM (2x64 GB) ho fototra - 800 $ izany. Ny tarehimarika dia nalaina avy amin'ny fanambaran'ny orinasa Corsair. Angamba, aorian'ny fampisehoana ny LGA 1700 dia hihena ny vidin'ny mpifaninana. Saingy ambanin'ny 500 dolara amerikana dia tsy handany vola ny 128 GB.
SSD drive ho an'ny LGA 1700 - vidiny
Azonao atao ny manadino ny Sata rev 3.0. Ity dia dingana iray izay efa nolalovana, izay tena fetran'ny bandwidth. M.2 PCI-E 4 sy 3. Ny endrika dia misy ifandraisany amin'ny tsena. Ary ny vidiny dia tsy mora. Andao horaisintsika ho toy ny fototra ny marika Samsung malaza indrindra, ary hahazo $ 500 ho an'ny fahaiza-mitahiry 2TB. Natao ho an'ny fametrahana ny rafitra sy ny lozisialy. Amin'ny andraikitry ny fitaovana fitehirizana tahirin-kevitra sy haino aman-jery, afaka mizotra miaraka amin'ny HDD mahazatra ianao.
Famatsiana herinaratra ho an'ny LGA 1700 - izay tsara kokoa
Ireo mpanamboatra fitaovana rehetra, amin'ny maha-iray azy, dia miresaka momba ny fitomboan'ny volan'ny solosaina. Noho izany, tsara kokoa ny mivezivezy farafaharatsiny 800-1000 watt. Mazava ho azy fa miresaka momba ny solosaina misy karatra sary tsy mitovy izahay. Raha tsy izany dia tsy takatra ny fanavaozana ny LGA 1700.
Betsaka ny tolotra eny an-tsena, saingy voafetra ny safidy. Izahay dia matoky ny marika SeaSonic azo itokisana. Nanana traikefa tamin'ny famatsiana herinaratra avy tany Corsair, Gigabyte, Asus aho - gaga be izahay fa misy takelaka SeaSonic ao anatin'ny sakana. Azonao atao koa ny mijery mangina sy Chieftech. Ny ambiny, avy eo amin'ny tsipika voltage, mandainga, avy eo buzz, avy eo manafana. Haizina.
Ny singa mpamatsy herinaratra ara-dalàna (SeaSonic) 80+ Platinum na Titanium dia mitentina 400 $. Hanao safidy isika amin'ny alàlan'ny PSU 1 kW misy tariby azo esorina. Ny tombony eto dia ny fahombiazana sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampangatsiahana ao anatin'ity tranga ity.
Amin'ny farany - ohatrinona ny vola ilainao manavao ny LGA 1700
Offhand, ny PC tsara indrindra amin'ny sehatra Intel LGA 1700 vaovao dia havoaka amin'ny 2800 dolara amerikana. Ity dia miaraka amin'ny PSU sy drive SSD. Raha mamela anao hanova ny CPU, MB ary RAM fotsiny ny loharanom-pahalalana, dia $ 1900 ny vidiny. Mahavariana ny vola, saingy ny fampisehoana sehatra nampanantenaina dia avo 10-15 heny, toa mahaliana kokoa izany. Ankoatr'izay, "eo an-tampon'ny onja", dia afaka mivarotra am-pahombiazana ny fikirana taloha eo amin'ny lozisialy LGA 1151 amin'ny teny tiana.
Sal Ny isa sy ny takiana etsy ambony dia hevitry ny mpanoratra ny TeraNews fotsiny. Ity no traikefa izay azon'ny mpitantana ny rafitra sy ny programmer izay nanova ny sehatra Intel hatramin'ny 1998. Hatramin'ny andro nandraisan'ny mpanoratra i486 ho fanomezana avy amin'ny ray aman-dreniny ary nentina tamin'ny programa izy. Isan-taona dia nanangona vola an'arivony dolara tamin'ny fitaovana ny mpanoratra, nahazo izany tamin'ny tanany avy ary avy eo. Tsy misy trosa, indram-bola na trosa. Ny fanisana marina sy mangatsiaka dia nanampy foana hahita marimaritra iraisana amin'ity tontolon'ny teknolojia IT ity izay miovaova be sy haingana.
ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition karatra sary